Maitiro & kutsvaga kwezvinyorwa pane iyo nyaya:blockchain
Elon Musk angave aine chirongwa chakakura cheBitcoin? Mucherechedzi anotarisa anoongorora
Mucherechedzi wekrispto anotenda Musk anoronga kushandisa Bitcoin kukwezva vashandisi vazhinji muzvimisikidzo. Tesla inowana "zvikwereti zvakatipoteredza" nekutengesa zero-emission mota dzayo dzimwe dzacho dzinotengeswa kune vagadziri vemotokari avo vasati vaine zero-emission mota. Tesla CEO Elon Mu
Bitcoin yakatora chingangoita 5% yakarova mukupera kwesvondo uye nyanzvi dzinobatanidza kudonhedza kune zvakataurwa naElon Musk zvichangoburwa pa Twitter. Justin Sun ati achatenga zvese Bitcoin zvinotengeswa nemutungamiriri weTesla sezvo Musk achitaura nezvechikwata chake kubva kuBitcoin. . Chishanu
Iwo musika weNFT unodonha 90%, kubva pamamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe emadhora mukutengesa kusvika pamamirioni emadhora 19,4. Crypto-arts inoenderana neNFTs yakave yakatorwa nema metaverse-ane hukama maNFTs senge dijitari zvivakwa uye zvigadzirwa muvhiki rapfuura. Kudiwa kwaive kusingaenzanisw
Sei mabhizinesi anogona kukohwa mabhenefiti e cryptocurrency
MaBhizimusi Anogona Sei Kukohwa Kubatsirwa kweCryptocurrency Kubva Bitcoin, iyo yekutanga mari yemadhora, yakavhurwa neyakavanzika Satoshi Nakamoto muna2009, mari yemadhora yakatora nyika yezvemari nemhirizhonga. Kunyangwe pakati penjodzi ye2020, sezvo indasitiri yezvemari yakarova nekudonha kutende
Bitcoin iri kunanga kumwedzi uye kamwechete izvo zvinoreva chaizvo
"(Isa mari yemari pano) inoenda kumwedzi" inowanzo taurwa nevanhu vachiedza kutora mitengo yemadhora avo ekudyara munzvimbo yekufananidzira, yanyanyisa kushandiswa. Munguva pfupi yapfuura, zvakadaro, chirevo ichi chakatora chirevo chaicho. Kutanga kwaMay, zvakaziviswa kuti SpaceX yaizovhura iyo "DOG